ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ - Infinity-Electronic
ဖက်စ်:+00 852-3050 6944
နေရပ်လိပ်စာ:17F, Gaylord ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အဆောက်အအုံ, 114-118 Lockhart လမ်း, ဝမ်ချိုင်, ဟောင်ကောင်
Infinity-Semiconductor.com သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်ပေးသည်နှင့်ထုတ်ဖော်ပါဘူး, ငှားရမ်းသို့မဟုတ်တတိယပါတီများမှသူတို့ကိုရောင်းချပါတယ်။
သင်နေသောကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုထောက်ပံ့ခြင်းမရှိဘဲကြှနျုပျတို့၏ website သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကိုးကားဘို့ကိုတောင်းဆိုချင်ပြီးတာနဲ့သင်ကသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုဘို့ငါတို့တောငျးဆိုခကျြပုံစံဖြည့်စွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးရွေးချယ်ပါကကြှနျုပျတို့၏ site သာဆန္ဒအလျောက်ဧည့်သည်များအားဖြင့်ထောက်ပံ့သောသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း။ ကျနော်တို့ကအောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသိုလှောင်မှုပါလိမ့်မယ်:
အဆိုပါမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များကိုတုံ့ပြန်နိုင်ရန်အတွက် E-mail ကိုလိပ်စာ, ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်,
ဝယ်ယူအမိန့်ကို process မှဘဏ္ဍာရေးသတင်းအချက်အလက်, ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်များ,
စံကို web log ကိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်သုံးစွဲသူများက IP address ကိုအပါအဝင်အခြားသတင်းအချက်အလက်,
Infinity-Semiconductor.com မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ Infinity-Semiconductor.com မှာသင့်ရဲ့ privacy နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအကြီးအနှငျ့ ပတျသကျ. ကိုင်တွယ်လျက်ရှိသည်။ အောက်ပါကြေညာချက်ကျနော်တို့အသုံးပြုလမ်းအကြောင်းကိုသင်ကအသိပေးကျနော်တို့စုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ Infinity-Semiconductor.com သွားရောက်ကြည့်ရှုတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ server ကိုအလိုအလျှောက်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သင်၏ IP လိပ်စာကိုတွင်းသို့။ တစ်ခုက IP address ကိုအခြေခံအားဖြင့် web server သို့တောင်းဆိုမှုအောင်ကွန်ပျူတာများ၏လိပ်စာဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုသို့မဟုတ်အသေးစိတ်ဒီဒေတာကိုဖလှယ်မှု-တစ်ဦးဧည့်သည်ရဲ့ browser မှာရရှိသောဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမျှမကဤအချက်အလက်များကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်မဟုတ်။
Infinity-Semiconductor.com မှာဧည့်သည်များက IP လိပ်စာများကိုအခါအားလျော်စွာပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်စောင့်ကြည့်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့နှင့်ထိထိရောက်ရောက်သာကျွန်တော်တို့ရဲ့ web site ကိုတိုးတက်အောင်, သူတို့သည် Infinity-Semiconductor.com အပြင်ဘက် shared မည်မဟုတ်ပါနေကြသည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုလာရောက်လည်ပတ်စဉ်အတွင်းကျနော်တို့အဆက်အသွယ်သတင်းအချက်အလက် (အီးမေးလ်လိပ်စာ, တယ်လီဖုန်းနံပါတ်, ရေကြောင်း / ငွေတောင်းခံဘို့ဖက်စ်နံပါတ်နှင့်လိပ်စာများ) အတွက်သင်မေးလိမ့်မည်။ ဤအချက်အလက်တစ်ဦးမိမိဆန္ဒအလျောက်အခြေခံနှင့်သာသင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူပေါ်စုဆောင်းနေပါတယ်။
Infinity-Semiconductor.com အကြောင်းအရာ, ဝန်ဆောင်မှုများ, ကြော်ငြာနှင့်တတိယအုပ်စုတွေက operated ကို web site ကိုလင့်ထားသောသည်အခြားပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့ဒီဆိုက်များအားဖြင့်ကောက်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကျော်မျှထိန်းချုပ်မှုရှိသည်, တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ဤဆိုဒ်များတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုတာဝန်ယူမကျင့်။
cookies သင့် hard drive ကိုအပေါ်ထားရှိရိုးရှင်းတဲ့စာသားမဖိုင်တွေဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့တစ်တွေကွန်ပျူတာထဲမှာသိမ်းထားအခြားမည်သည့်ဒေတာအဖြစ်နည်းတူအန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ကြသည်။ ကွတ်ကီးကို web site များအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနှင့်ဧည့်သည်များ၏အဆင်ပြေစေရန်အတွက်ဒေတာသိမ်းဆည်းဖို့အသုံးပြုကြသည်။ တစ်ဦးက cookie ကိုမပြုလုပ်ဖန်တီးသောတဦးတည်းထက်အခြားဝဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုတဲ့, မကထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဒေတာထက်အခြားသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေဒေတာတွေကိုဖတ်ပါနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်ငါတို့၏ cookies များကိုထဲမှာသိမ်းထားဖို့ရှေးခယျြအဆိုပါဒေတာကိုဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်များကိုအဆက်အသွယ်သတင်းအချက်အလက်, သို့မဟုတ်အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်အထိခိုက်မခံ data တွေကိုမပါဝင်ပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုသာသူတို့ကအထူးလိုအပ်ပါတယ်အကြောင်းအရာကယ်နှုတ်တော်မူနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည် '' အကွိုကျမှတ်မိဖို့ cookies များကိုအသုံးပြုသည်။